ह्वात्तै वढ्यो कांग्रेसभित्र चौंधौ महाधिबेशनको फिभर
पार्टी संस्थापनपक्ष केहि ठोस अवस्थामा रहेपनि गैरसंस्थापनको तरल स्वभावले काङग्रेस भीत्र पाक्ने खिचडीको स्वाद प्रत्येक दिन फेरीएको पाइन्छ । खासगरी पूर्व महामन्त्री तथा तेह्रौँ महाधिवेशनमा सभापतिका दाबेदार कृृष्णप्रसाद सिटौलाको तरल स्वभावले काङग्रेस भीत्र गुटहरु भत्किने र बन्ने क्रम चलीरहेको छ ।
२७ साउन, काठमाडौँ । मुख्य विपक्षी दल नेपाली काङग्रेस भीत्र चौधौँ महाधिवेशनको फिभर ह्वात्तै बढेको छ । आइतवार बसेको केन्द्रिय समिती वैठकले सहमतिमै नयाँ संरचनाको पदपूर्ति गर्ने भने पनि ति संरचनाहरुमा कसले पकड जमाउने भन्ने विषय पेचीलो वन्दै गएको छ ।
आगामी पुषबाट मात्रै महाधिवेसनको तयारी गर्ने भनिए पनि नयाँ संरचनाको पदपूर्तिलाई पार्टीका नेताहरुले महाधिवेसनको तयारीका रूपमा लिएको बुझिएको छ । भदौ २० भित्रै सहमतिका आधारमा अन्तरीम संरचना बनाइसक्ने पार्टीको निर्णय रहेको छ ।
संस्थापन भीत्र उपसभापतीद्वय विजयकुमार गच्छादार र विमलेन्द्र निधीले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न दौड सुरु गरेपनि अन्य नेताहरू सभापती शेरवहादुर देउवासँगै गोलबद्ध रहेको पाइन्छ । तर गैरसंस्थापनमा वरीष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, मृहामन्त्री डा ससाङक कोइराला र पुर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेतृत्वका लागी दावी गर्ने सम्भावना वढेको छ ।
नयाँ कसरतमा डा.कोइराला
भारतमा गान्धी नेहरु परीवारले भारतीय काङ्ग्रेसको डुङ्गापार लगाउन नसकेको अवस्थामा नेपालमा कोइराला परीवारका सदस्यहरुले नेपाली काङ्ग्रेस हाँक्ने तयारी सुरु गरेका छन् ।
डा ससाङ्कको नेतृत्वमा डा.शेखर र सुजाता कोइरालाले काङ्ग्रेस भित्रका प्रभाव समूहलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने तयारी सुरु गरेका छन् । पुर्वमहामन्त्री स्व. खुुमवहादुर खड्का समर्थकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पनि कोइराला समूहले सुरु गरीसकेको छ । सांसद पुष्पा भुसाल, पुर्वमन्त्री शंकर भण्डारी सहितका नेताहरूसँग कोइराला समूह सघन वार्तामा रहेको वताइएको छ ।
यसैगरी कोइराला समूहले सिटौलालाई राजकीय पदमा समर्थन गर्नेगरी पार्टीमा सभापतीका लागी सहयोग गर्न अनुरोध गरेको निकट स्रोतहरुले बताएका छन् । सीटौलाले कोइरालाहरूको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताइएको छ ।
उपसभापती गच्छादारसँग पनि कोइराला समूहले वार्ता चलाइरहेको बुझिएको छ । गच्छादारले अहिले सम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको वताइएको छ ।
जता ढल्को उतै मल्को
पार्टीभीत्र एउटा सधैँ चलायमान समूह छ । अर्जुननरसिंह केसी डा. मीनेन्द रीजाल, डा.नारायण खड्का, अजय चौरसीया, मोहनवहादुर वस्नेत लगायतका नेताहरुको आफ्नो स्थाइगुट छैन । यो समूहको समर्थन जहिले पनि शक्तिशाली समूहलाई हुने गरेको छ । यो समुह सँगपनि कोइराला समुह अट्याचमा रहेको बताइएको छ ।